Mpanamboatra sy mpamatsy famokarana tsipika famokarana China Ampoule | IVEN
Tsipika famokarana ranon-tsindrona azo tsongaina - Ampoule SVP
Ho an'ny famokarana ampoule vera.
Izy io dia mandray teknolojia fanasana rano 2 sy rivotra 2 amin'ny rindrina ivelany ary rano 3 sy rivotra 4 amin'ny rindrina anatiny.
Vondron-tsindrona famafazana 6 no manana fanasan-dàlana, fanjaitra feno 316L no ampiasaina amin'ny fanjaitra. Rafitra fanaraha-maso Servo + Toro-tànana sy birao fitarihana manome toerana marina ny fanjaitra famafazana, hialana amin'ny fanimbana fanjaitra vokatry ny tsy fitoviana
Ny rivotra WFI sy ny rivotra voafintina dia miato kely, mampihena ny fihinanana.
Dingana fanasana mahazatra:
2. Fanasana mialoha ultrasound
3. Rano voaverina: ao anaty fanasana, any ivelany ny fanasana
4. rivotra voahidy: ao anaty tsofina
5.Recycled rano: ao anaty fanasana, ivelany ny fanasana
6. rivotra voafehy: ao anaty tsofina
7.WFI: ao anaty fanasana
8. rivotra voafehy: ao anaty tsofina, any ivelany mitsoka
9. rivotra voafehy: ao anaty tsofina, any ivelany mitsoka
Ireo tavoahangy voasasa dia miditra amin'ny milina fanamainana sy fanamainana miadana tsikelikely amin'ny fehikibo. Mandalo ny faritra mialoha ny hafanana, ny faritra mihamangatsiaka amin'ny hafanana, ny faritra mangatsiaka tsikelikely.
Ny mpankafy mando ny hamandoana dia mamoaka ny etona tavoahangy ho an'ny ety ivelany, amin'ny faritra misy hafanana be, ny tavoahangy dia voadio mandritra ny 5 minitra ambanin'ny 300-320 ℃. Ny faritra mangatsiaka dia mampangatsiaka ny tavoahangy voadio, ary farany mahatratra ny takian'ny teknolojia.
Ny dingan'ny fanamainana sy fanamainana tanteraka dia miasa eo ambany fanaraha-maso tena izy.
Famenoana & famehezana
Ity milina ity dia mandray rafitra fandefasana tsikelikely miaraka amin'ny rafitry ny lavarangana.
Ny milina dia mamita ho azy ny fizotran'ny famokarana manontolo:
Fampitaovana Auger --- Fampandrenesana azota voalohany (tsy voatery) --- Famenoana vahaolana --- Fampidinana nitroka aoriana (tsy voatery) --- Preheating --- famehezana --- Fanisana --- Famokarana vokatra vita.
Tombony famokarana famenoana ampoule
1. Ny tsipika mifono dia mahatsapa ny fifandraisana tokana, ny fandehanana mitohy avy amin'ny fanasana, fanamafisana, famenoana famehezana. Ny fizotry ny famokarana manontolo dia mahatsapa ny fiasan'ny fanadiovana; miaro ny vokatra amin'ny loto, mahafeno ny fenitra famokarana GMP.
2. Ity tsipika ity dia mandray ny rano sy ny faneriterena ny fanamafisam-peo amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo sy ny fanasana ultrasonika amin'ny fanjakana mivadika. Ny vokatra fanadiovana dia tena tsara.
3. Ny haitao ultra filtration dia ampiharina amin'ny sivan'ilay milina fanasan-damba. Ny rano fanasana madio sy tsy misy volo ary rivotra voafehy dia azo avy amin'ny sivana terminal, izay afaka manatsara ny fahazavan'ilay tavoahangy voasasa.
4. tavoahangy ao anaty feed auger sy kodiarana mihaona, kely ny habaka auger. Ampoule afaka mandeha mahitsy. Ny ampoule dia afaka mamindra milamina kokoa ary sarotra vaky.
5. Ireo manipulateur stainless dia lafiny iray manamboatra. Ny toerana dia marina kokoa. Ireo manipulator dia porofo mitafy. Rehefa manova ny haavon'ny pitch dia tsy mila mivelatra sy mihodina izy. Ny fiolanan-tsolika dia tsy misy fandotoana ny rano fanadiovana.
6. Ny ampoule dia voadio amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fanamorana ny rivotra laminary. Ny fizarana hafanana dia mitovy tanteraka. Ny ampoule dia eo ambanin'ny fepetra fanamafisam-peo avo lenta HDC, izay mahafeno ny fenitry ny GMP.
7. Ity fitaovana ity dia mampiasa fitsipiky ny famehezana tsindry ratsy hamehezana ny sivana avo lenta izay ampiasaina hanadiovana ny tionelina. Mora ny mametraka ny sivana izay afaka miantoka ny fepetra fanadiovana zato.
8. Ny fitaovana dia mandray hafanana amin'ny seza karazan-tsofina ary rafitra fananganana rivotra mafana marindrano. Ny fikolokoloana ny fitaovana dia mora kokoa sy miasa.
9. Ity fitaovana ity dia mandray ny fehikibo misy rojo vy amin'ny sisiny. Ny fehikibo fampitana dia tsy ho diso lalana, anti-creeper, tsy misy tavoahangy latsaka.
10. Ireo fitaovana dia mandray teknolojia mialoha toy ny famenoana fanjaitra amin'ny fanjaitra, famenoana azota anoloana sy aoriana ary famehezana ny tariby, izay afaka mifanaraka amin'ny fenitry ny karazan-vokatra.
11. Ny milina famenoana tombo-kase dia mandray ny rafitry ny lavarangana. Ny kodiarana kintana amin'ny famahanana sy mampita tavoahangy tsy tapaka, ny fihazakazaky ny fitaovana dia milamina ary tsy dia misy fahatapahana tavoahangy.
12. Io fitaovana io dia iraisan'ny rehetra. Tsy azo ampiasaina amin'ny ampoule 1-20ml. Mety ny manova ny faritra. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia azo ampiasaina ho fanasana lovia, famenoana ary fametahana tsipika feno amin'ny alàlan'ny fanovana lasitra sy kodiarana famahanana.
Famaritana azo ampiharina 1-20ml B ampoules ampoule izay mahafeno ny fenitry ny GB2637.
Fahaizana farafaharatsiny 7,000-10,000pcs / h
Fanjifàna WFI 0.2-0.3Mpa 1.0 m3 / h
Fanjifana rivotra voahidy 0.4Mpa 50 m3 / h
Fahaizana herinaratra CLQ114Visy ultrasonika fanasan-doha: 15.7KW
RSM620 / 60 Milina fanamainana sy fanamainana 46KW, herin'ny fanafanana: 38KW
AGF12 Ampoule famenoana sy famehezana milina 2.6KW
Dimensions CLQ114Visy fanasana ultrasonika vertika: 2500 × 2500 × 1300mm
RSM620 / 60 Milina fanamainana sy fanamainana: 4280 × 1650 × 2400mm
Masinina famenoana sy famehezana AGF12 Ampoule: 3700 × 1700 × 1380 mm
Weight CLQ114Ny milina fanasan-doha ultrasonic: 2600 Kg
RSM620 / 60 Milina fanamainana sy fanamainana: 4200 Kg
Masinina famenoana sy famehezana AGF12 Ampoule: 2600 Kg
Previous: Vialan'ny famokarana ranon-javatra Vial
Manaraka: PP tavoahangy IV vahaolana famokarana